Coinbase ujoyina Earn.com - Blockchain News
UTshazimpuzi 16, 2018 admin
Coinbase ujoyina Earn.com
Cryptocurrency exchange Coinbase ubhengeze ekufunyanweni Earn.com, kuthiwa for $ 120m.
Earn.com, enye zokuqala kakhulu inkxaso zolu shishino, yaye ngaphambili yaziwa ngokuba 21 inc. wabaleka umsebenzi zemigodi Bitcoin, kuxhaswa yi technology evela Intel, yaye kamva liqalise developer layo ligxile “21 Bitcoin Computer” ngo 2015.
Le nkampani rebranded ku Earn.com Oktobha yokugqibela ebenesizikithi ubonileyo sungula iiwebhsayithi ejolise incentivizing abasebenzisi ukuba bagqibezele imisebenzi kutshintshiselwano imivuzo cryptocurrency.
Le veki Coinbase isaziso: “Imali iye wakha imveliso email kuhlawulwe ingcono enye izicelo zokuqala blockchain pfunaka ukuphumeza imoto olunentsingiselo. Siza kuqhubeka Earn ngokubaleka ishishini kuba loo nto ibonisa eninzi isithembiso kunye namandla.”
Bitcoin ATM inethiwekhi Coinsource isebenza kunye multi-factor umqinisekisi Acuant
Argentina eptem bank ...
Post Previous:Jamani No. 2 Izicwangciso stock exchange ukulungiselela ukuqaliswa kwe-Crypto Trading App
Post Next:Insurance broker Marsh isebenza kunye IBM ku Blockchain eqongeni
UCanzibe 8, 2018 e 5:53 PM